वर्महोलहरू। तपाईं समय को माध्यम बाट यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जब तपाईं क्वान्टम फिजिक्स र समयको बारेमा यात्रा गर्नुहुन्छ वा अन्य आयामहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ, अंतहीन सिद्धान्तहरू गणितीय गणनाको माध्यमबाट देखा पर्दछन्। यस अवस्थामा, हामी यस बारे कुरा गर्नेछौं वर्महोलहरू। निश्चय नै तपाईले अरु विश्वहरू वा समानान्तर ब्रह्माण्डको अस्तित्वको बारेमा सुन्नुभएको छ जुन एक मात्र वास्तविकतामा हामी अवस्थित हुन्छौं। ठीक छ, वर्महोल भनेको ढोका वा टनेल हो जुन यी दुई बिन्दुलाई ठाउँ र समयमा जोड्दछ र यसले हामीलाई एक ब्रह्माण्डबाट अर्को जान अनुमति दिन्छ।
यद्यपि यस्तो कुनै चीजको अस्तित्व कहिल्यै प्रमाणित भएको छैन, गणितको दुनियामा यो सम्भव छ कि तिनीहरू देखा पर्न सक्छन्। तसर्थ, हामी यो लेख लाई वर्महोलको व्याख्या गर्न समर्पण गर्न गइरहेका छौं र यदि गणित सहि छन् भने उनीहरू कसरी काम गर्ने छन्।
1 गँड्यौला के हो?
2 समयमा यात्रा गर्दछ
3 ठाउँ र समय का विरोधाभास
4 मर्ने कुचल
गँड्यौला के हो?
यो नाम दुई समानान्तर ब्रह्माण्डहरूका बीचमा ढोकाको प्रतिनिधित्व अघि राखिएको छ मानौं तिनीहरू एक स्याउको अन्त हुन्। यसैले, हामी कीराहरू हौं जुन यसलाई अन्तर-समयको माध्यमबाट पार गर्न क्रस पार गर्दछ। यो भन्न सकिन्छ कि तिनीहरू अन्तरिक्ष-समयका कपडाहरू हुन् जसले हामीलाई एक अर्काबाट दुई टाढा टाढाका बिन्दुहरूलाई एकजुट गर्न अनुमति दिन्छ।
सिद्धान्तमा, एक समानान्तर ब्रह्माण्डबाट अर्कोमा जानु हाम्रो प्रकाशको गतिमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई पार गर्नु भन्दा छिटो हुन्छ। आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तका अनुसार, यी प्वालहरू हामीलाई अन्य आयामहरूमा पुर्‍याउन सक्षम छन्। गणितिय गणनाले हामी कसरी त्यस्ता पोर्टलहरू फेला पार्न सक्छौं भनेर देखाउँदछ, तर यस्तो जस्तो कहिले देखिएको वा पूरा भएको छैन।
तिनीहरूको स्थान र समयका बिभिन्न बिन्दुहरूमा प्रवेश र निकास छ। दुई एक्जिटहरू बीचको बाटो भनेको कीरालाई जोड्ने एक हो र यो हाइपरस्पेसमा छ। यो हाइपरस्पेस बाहेक केहि छैन एक आयाम जसमा गुरुत्वाकर्षण र समय एक विकृति भएको छ, यो नयाँ आयाम पैदा गर्न को कारण।
यो सिद्धान्त आइन्स्टाइन र रोजेनको दृष्टिकोणबाट उत्पन्न भएको थियो जब उनीहरू कालो प्वाल भित्र के हुन्छ भनेर जाँच गर्न चाहन्थे। यी प्वालहरूको अर्को नाम हो आइन्स्टेन-रोजेन ब्रिज।
त्यहाँ तिनीहरू कनेक्ट भइरहेको विन्दुमा निर्भर गर्दै वर्महोलका दुई प्रकार छन्।
इंट्रायनाभर्सी: यी ती प्वालहरू हुन् जसले Cosmos बाट दुई पोइन्ट टाढा राख्दछन् तर जुन एउटै ब्रह्माण्डमा सम्बन्धित छ।
Interuniverse: तिनीहरू प्वालहरू हुन् जसले दुई भिन्न ब्रह्माण्डहरूलाई जोड्दछ। यी, हुनसक्छ, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण र खोजी गर्न इच्छुक छन्।
समयमा यात्रा गर्दछ
अवश्य पनि, यस प्रकारको कुरा गर्दा, समय यात्राको सम्भावना जहिले पनि प्रश्न गरिन्छ। र यो पक्कै पनि हामी सबै विगतका गल्तीहरू सुधार्न, हराएको समयको फाइदा उठाउँदै वा बसोबास गर्दा र अर्को युगको अनुभव गर्ने विभिन्न कारणहरूको लागि समयमै यात्रा गर्न चाहन्छौं।
यद्यपि, तथ्य यो हो कि वर्महोलहरू अवस्थित छन् र ती अन्तरिक्ष र समयमा यात्रा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ धेरै भिन्न चीजहरू हुन्। यो सम्भव थियो भन्ने विश्वास गर्नलाई ट्रिगरहरू मध्ये एउटा कार्ल सागनको उपन्यास "सम्पर्क" थियो। उपन्यास मा भने यो वर्महोल प्रयोग गरेर अन्तरिक्ष र समयको माध्यमबाट यात्रा गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। यो उपन्यास शुद्ध विज्ञान कथा हो र यो यथार्थमा भनिएको छ कि यो वास्तविक देखिन्छ, यो छैन।
पहिलो कुरा यो हो कि वैज्ञानिकहरूले यस विषयलाई सबैभन्दा बढी जोड दिन्छ कि वर्महोलको अवधि धेरै छोटो छ। यसको मतलब यो हो कि यदि हामीले यस हाइपरस्पेसबाट यसको निस्कनको बीचमा यात्रा गर्यौं भने हामी यसमा फस्नेछौं, किनभने बाहिर निकै चाँडै बन्द हुनेछ। त्यहाँ अर्कोको अन्त्यमा बाहिर निस्कन सफल भएकाको कुरा पनि छ, कहिल्यै फर्किन सक्दैन। यो यस्तो हुन्छ किनकि वर्महोल जहिले पनि एकै ठाउँमा वा एकै समयमा सिर्जना हुँदैन, र एक फेला पार्ने सम्भावना जुन उहि बिन्दुमा फर्कन्छ जुन धेरै, एकदम कम हो।
ठाउँ र समय का विरोधाभास
सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तका अनुसार, समय यात्रा गर्न सकिन्छ तर केहि सर्तहरूको साथ। पहिलो यो हो कि हामी केवल भविष्यको लागि यात्रा गर्न सक्छौं, विगतमा होइन। योसँग तर्क छ जुन ठाउँ र समयका केहि विरोधाभासहरूमा पुर्‍याउन सक्छ। एक क्षणको लागि कल्पना गर्नुहोस् जुन तपाईं तपाईंको जन्मको अतीतमा विगतको यात्रा गर्नुहुन्छ। बिभिन्न तथ्यहरू जुन तपाईं उत्तेजित गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरू ईतिहासको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सक्छन् र तपाईं कहिल्यै जन्म भएको छैन। तसर्थ, यदि तपाईं जन्मनुभएको थिएन भने, तपाईं विगतको यात्रा गर्न सक्नुहुन्न र तपाईं कहिले अस्तित्वमा हुनुहुन्नथ्यो।
हराउँदै जाने सरल तथ्यबाट, इतिहासले यसको मार्ग चलाउँदैन। तपाईंले सोच्नु पर्छ कि हामी सबै प्रसिद्ध व्यक्तिहरू होइनौं वा हामी ठूलो ईतिहासमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सक्दछौं (उदाहरणका लागि सरकारको अध्यक्ष), हामी इतिहासमा हाम्रो बालुवाको अन्नलाई पनि योगदान दिन्छौं। हामी चीजहरू गर्छौं, हामी घटनाहरू भoke्ग गर्छौं, हामी मानिसहरूलाई सार्छौं र हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग लि establish्क स्थापित गर्छौं, यदि तिनीहरू हराउँछन्, तिनीहरूको अस्तित्व कहिल्यै हुँदैन र हामी अस्थायी विरोधाभास सिर्जना गर्दछौं।
तसर्थ, यदि हामी भविष्यको यात्रा गर्छौं भने घटनाक्रमको क्रम परिवर्तन हुँदैन, किनकि यो त्यस्तो चीज हो जुन अहिलेसम्म भएको छैन र केवल "अब" मा के गर्छौं त्यसमा निर्भर गर्दछ। यी सिद्धान्तहरूले पनि ब्रह्माण्डका अन्य रूपहरू र आयामहरू देखा पर्दछन् भन्दा अधिक जटिल हुन्छ, किनकि हामी अधिक समय रेखाहरू स्थापना गर्दछौं।
वर्महोलहरूको माध्यमबाट अन्तरिक्षमा यात्रा गर्ने क्रममा हामी पार गर्न सक्ने एउटा तथ्य यो हो कि हामी कुचालिन सक्छौं। यी प्वालहरू तिनीहरू वास्तवमै सानो छन् (करीव १० ^ -10 cm सेमी) र धेरै अस्थिर छन्। सुरुnelको दुई कुनामा भएको गुरुत्वाकर्षण तानको ठूलो मात्रामा यसले कसैलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नु अघि यसलाई भत्काउँछ।
यसको बावजुद, यदि हामीले एक चरमबाट अर्कोमा जान को लागी प्रयास गरेका छौं भने, हामी कुल्चिन्छ र धूलोमा परिणत हुन्छौं किनभने यी बिन्दुहरूमा गुरुत्वाकर्षण चरम स्तरमा पुग्छ। सिद्धान्तमा गणितको हिसाबले यो सम्भव बनाउने हुनाले भविष्यमा यसले प्रविधि सिर्जना गर्न सक्दछ जुन गुरुत्वाकर्षणको त्यस्तो स्तरहरूको सामना गर्दछ र प्वाल हराउनु अघि उच्च गतिमा यात्रा गर्दछ।
मलाई आशा छ कि यो जानकारी जिज्ञासु थियो र तपाईंको मनोरन्जन भयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » वर्महोलहरू
के हुन्छ यदि मार्समा एउटा प्वाल सिर्जना गरियो जुन अर्को ब्रह्माण्डमा गयो